Ilay mpilalao sarimihetsika Nollywood malaza antsoina hoe Genevieve Nnaji dia manambara ny antony mbola mpitovo
Ilay mpilalao sarimihetsika Nollywood malaza antsoina hoe Genevieve Nnaji dia manambara ny antony mbola manambady mbola 41 taona
Novelas actuOLONA SY FAHAFAHANA
By bryanekobe Last nohavaozina Aogositra 27, 2020
Ilay mpilalao sarimihetsika Nollywood malaza sady mpamokatra Genevieve Nnaji dia nanambara ny antony mbola manambady ary izay tena mahatahotra azy indrindra momba ny fanambadiana.
Ilay kintana Nizeriana dia mbola mpitovo, fa manana zanakavavy tsara tarehy izay vao tsy manambady. Tao anaty tafatafa iray notaterina tamin'ny ghgossip, nambaran'ny mpilalao sarimihetsika ny antony maha-tahotra ny hanambady azy. Ny Genevieve Nnaji dia matahotra ny tsy fahombiazan'ny fanambadiany, izay tsy tadiaviny, noho izany ny safidiny mba hijanona ho mpitovo.
“Raha manambady aho dia tena te hijanona ao amin'ny fanambadiana, ary tsy mora ny mijanona ao anatin'ny fanambadiana. Midika izany fa mifanaraka amin'ny namanao tanteraka ianao, ”hoy izy.
"Midika izany fa nahita ny vadinao ianao ary mila miaritra fanadinoana maro izay hitranga, nefa tsy maintsy mianatra mamela heloka koa ianao," hoy izy.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tao amin'ny: https://www.afrikmag.com
mpilalao mpilalao sarimihetsika malazaGenevieve Nnajidia manambara ny antony mbola manambady mbola 41 taona izy
Regina Daniels mariazy fotsy - Video
Matin Bonheur nataon'i RTI 1 tamin'ny 20 septambra 2014 niaraka tamin'i Mariam Coulibaly - fizarana 1 - Lahatsary